Fitsidihana ny lava-bato any San José sy ny tanàna Iberia - Ikkaro
firosoana >> Lohahevitra hafa >> Fitsidihana ny lava-bato any San José sy ny tanàna Iberia
Zohy any San José
Hita ao amin'ny Vall de Uxó, Castellón, any Espana izy ireo. Azonao atao ny mahita ny toerana misy azy sy ny fomba hahatongavana eto
Io no renirano ambanin'ny tany lavitra indrindra azo aleha any Eropa. Azonao atao ny mivezivezy 800 m amin'ny sambo misy halaliny eo anelanelan'ny 1m sy 11m ary làlana anatiny mandeha tongotra 250 m. Vatosokay indrindra ny vatolampy.
Io no ampahany azo tsidihina, fa misy 2600 metatra hafa mihidy ho an'ny besinimaro izay dinihin'ireo zohy ka angamba indray andro dia azo tsidihina. Tsy mbola nahita ny niandohan'ny grotto izy ireo ary tsy fantany hoe avy aiza izy io.
Sarin'ny fanambanin'ny renirano ambanin'ny tany, amin'ny faritra marivo
Misy sary hosodoko lava-bato eo am-baravarana, saingy tsy fantatra tsara izy ireo ary tsy manam-potoana hijerena azy ireo ianao. Avy amin'ny vanim-potoana Magdalenian izy ireo. Nonina nandritra ny 17.000 taona ilay lava-bato.
Ny maripanan'ny lava-bato dia mijanona tsy tapaka mandritra ny taona amin'ny 20ºC.
Nanontaniako tamin'ilay mpitondra sambo ny haavon'ny rano, satria fantatro fa rehefa avy be ny orana dia tsy maintsy manidy ny fitsidihana izy ireo satria lasa tsy mandeha io ary nilaza tamiko izy ireo fa mitazona ny haavon'ny rano amin'ny vavahady izy ireo.
Miresaka ny fitomboan'ny stalagtites 1 cm isaky ny 100 tapitrisa taona izy ireo. Saingy mazava ho azy fa hiankina betsaka amin'ny habetsaky ny rano, ny orana, izany sivana izany.
Ao anaty renirano dia misy lava-bato lehibe dia lehibe, izay antsoin'izy ireo hoe zohy amin'ny ramanavy, satria rehefa hitan'izy ireo dia feno ramanavy nonina tao izy io. Amin'izao fotoana izao dia tsy misy. Sambo sy mpandeha amin'ny fahasosorana, fa koa ao anatin'io lava-bato io dia mijanona izy ireo ary manao fampisehoana audiovisual, manazava ny lava-bato miaraka amin'ny lokon'ny Miaina fiainana avy amin'ny Cold Play, toa eo am-baravaran'ny fampakaram-bady ianao. Ary miaraka amin'izay rehetra mitabataba izay dia mazava fa tsy nisy ramanavy sisa.
Amin'ny faritra tsy maintsy mihitatra, ho an'ny fitsangatsanganana mpizahatany miaraka amin'ny sambo dia afaka mahita ny mariky ny augers ianao.
Ny toa tsy rariny tamiko dia ny fanazavan'ireo mpitari-dalana. Fahavaratra vitsivitsy lasa izay dia tao amin'ny Cueva del Soplao any Cantabria izahay, ary nanazava taminay ny zava-drehetra tamin'ny volo sy famantarana. Mampalahelo fa tsy mba nitadidy momba an'io aho mba hahatsiarovako azy. Alika fantatro fa nanome lanja lehibe ny stalagticana tsy mitongilana izy ireo, fa tsy mitombo mankany ambany dia mitombo amin'ny lalana tsy mandeha. Tena tsy fahita firy izy ireo ary any amin'ny toerana vitsivitsy ary eto amin'ny Vall de Uxó dia zara raha nanonona azy ireo.
Ary tsy naneho hevitra na oviana na oviana izy ireo ny amin'ny olana mikasika ny fikasihana ireo stalagmites na stalagmites. Nolazain'izy ireo taminao fa fady ny hikasika azy ireo ary dia izay, fa tsy ny matavy an-tananay no manakana ny fitomboan'ny stalagtite satria tsy mamela ny masira hipetraka. Ka ny fikasihana stalagtite dia mety hidika ho famonoana dingana iray tapitrisa taona.
Tsara tarehy ireo lava-bato, ary mahavariana ny stalagtites, ny renirano, sns, fa ny tena nampiaiky ahy indrindra dia ny fandalovan'ny lesoka 2. Eny. Ny ankabeazan'ny fitsangantsanganana an-tongotra dia amin'ny alàlan'ny tionelina miendrika kônta, toy ny telozoro. ary raha mijery ianao dia mahita ireo takelaka 2 nifandona sy ny fomba nitsanganany namorona ny tendrombohitra. Fanamarihana izay 30 na 70 tapitrisa euro lasa izay (tsy tadidiko tsara fa mila mitady aho). Izany dia tokony ho eo ambanin'ny tendrombohitra.
Raha tianao ireo lohahevitra ireo dia afaka manomboka mianatra momba ny jeolojia amin'ny bokin'i Geolojista ao anaty fahantrana inona no dinihinay
Fanamarihana: Coladas, teboka fidiran'ny rano.
Na dia tsy manome rariny ny hakanton'ny lava-bato aza ity horonantsary ity dia ity avy amin'ny fantsona ofisialy
Tondra-drano ny lava-bato taorian'ny oram-be nandritra ny andro vitsivitsy tamin'ny 2016
Raha te-hahita fandaharam-potoana ianao ary hividy tapakila dia tsidiho ny Web ofisialy sy ny fantsony Youtube
Izy io dia tranonkala arkeolojika nambara fa Toerana iray mahaliana ny kolontsaina. Any amin'ny haavo voajanahary kely eo akaikin'ny lava-bato sy eo akaikin'ny reniranon'i Belcaire no misy azy. Ao amin'ity faritra renirano ity dia misy ihany koa ireo lava-bato ao Can Ballester, Cova dels Orgues ary SAng Josep, mazava ho azy.
Azo tsidihina an-kalalahana na amin'ny fitsidihana mitarika. Raha mandeha irery ianao dia tsy mahita afa-tsy amin'ny fomba fijery izay ahitanao ny taolan'ny tanàna. Raha mandray fitsangatsanganana arahanao avy any amin'ny Tourist Office ianao dia miditra ao an-tanàna ary hazavain'izy ireo izay rehetra fantatra momba ilay tranonkala.
Ny fahasamihafana dia tsy mitombina satria mitranga matetika amin'ireo tranga ireo. Raha mandeha samirery ianao dia mahita vato maromaro tsy voahidy. Raha mandeha miaraka amin'ilay mpitari-dalana ianao dia hanazava ny zavatra tsirairay izy, ny tantaran'ny tranonkala, izay rehetra fantatra momba azy io sy ireo teoria samihafa momba ireo zavatra hita. Ireo antontam-bato ireo dia hiseho ary hisy dikany, ho hitanao ny tilikambo, trano, arofanina, faritra ilaozana, afo, firy ny olona niaina ary ny fifandraisan'izy ireo amin'ny tontolo iainana sy ny fahalinana samihafa.
Olona manodidina ny 100 no velona. Nanana lafaoro metaly izy ireo sy ny fikosoham-bary ho an'ny voamaina. Nanoratra betsaka izy ireo, nahita lahatsoratra maro tao amin'ity tanàna ity izy ireo.
Amin'ny maha-te hahafanta-javatra eo amin'ny rindrin'ny trano iray, eo alohan'ireo toa dabilio hipetrahana, vato granita goavambe no ampidirina ho fahatsiarovana. Vato iray izay tsy hita any amin'ireo tendrombohitra ireo, na akaiky aza, mila mandeha 600 km eo ianao hahitana azy ireo. Inona no atolotry ny varotra. Fa mahaliana tokoa ny mahita azy miavaka an'arivony taona aty aoriana.
Amin'ity tranga ity dia hita ny tanànan'i San José any Iberia rehefa nanomboka nanova ny tany izy ireo hanangana trano fandraisam-bahiny eo an-tampon'ny havoana misy azy, miaraka amin'ny fahitana tsara. Na dia efa fantatra aza fa misy tranokala iray noho ny endri-tsoratra isan-karazany toa ilay botanista sy naturalista Cavanilles, izay efa nanonona izany tamin'ny diany. Na dia natao ho an'ilay mpanao hosodoko Juan Bautista Porcar aza ny nahitana azy, izay nitsidika azy io tamin'ny 1928.
Dingana samihafa amin'ny asa no voarakitra ao amin'ny tanàna, Iberianina sy Romanina manan-danja indrindra.
Tamin'ny andron'ny Iberiana, ny tanàna Sant Josep dia voaro tamin'ny rindrina nohamafisin'ny tilikambo. Ireo fizarana hatramin'ny 25m ny halavany ary 2m ny haavon'ity rindrina manodidina ity dia voatahiry. Tao anatin'ilay vala dia nisy arabe maromaro nifanaraka tamin'ny tsy fitovian'ny tany, izay trano nozaraina.
Ny fitrandrahana azy dia nahafahana namerina zavatra arkeolojika maro be mifandraika amin'ny fiainana andavanandro: fikosoham-bary ho fikosoham-bary, seramika ao an-dakozia (toy ny vilany), kaontenera fitahirizana sakafo (amphorae na siny) ary serivisy latabatra (lovia, siny, kaopy , sns.) na taolana biby
Misongadina ny zavatra hafa toa ny faritry ny fahadiovana (ungüentarios) na terracottas miendrika olombelona izay maneho vehivavy.
Momba ny vanim-potoana romana farany
Nandritra ny taonjato faha-XNUMX talohan'i JK (hitako fa ny ANE dia midika hoe Before Our Era, izany hoe BC fa ampiasaina hialana amin'ny fifandraisana ara-pinoana), afo be no nandrava ny ankamaroan'ny faritra avaratry ny tanàna, nahatonga an'io ampahany io farafaharatsiny nilaozana. Ny fikarohana arkeolojika dia mampiseho fa nandritra ny vanim-potoana romana, teo anelanelan'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX, dia nonina indray ilay tanàna, ary nanamboatra ny fananganana ireo rafitra; Anisan'ireo habaka voarakitra an-tsoratra, misy efamira mahitsizoro eo akaikiny izay misy firafitry ny fandoroana toa adika amin'ny lafaoro metallurgical.
Ny fitenin'ny Iberianina
Nolazain'ny mpitari-dalana fizahana iray taminay ny iray amin'ireo enigma an'ny Iberianina. Mbola tsy voavaha ny sora-tananao. Fantatsika ny toa azy avy amin'ny fiteny Celtiberian, saingy mbola tsy fantatra izay lazain'ny asa soratra hitan'ny vahoaka Iberianina.
Ary taorinan'ny fitsidihana dia nametraka gazety Muy Historia taloha ho ahy izy ireo miaraka amina lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe The Iberian miandry ny vatony Rosetta,
Hizaha ny boky Iberian. Fiteny, fanoratana, epigrafy avy amin'i Javier Velaza sy Noemí Mondcunill. Iray amin'ireo boky feno indrindra mandraka ankehitriny momba ny lohahevitra amin'ny teny Iberianina.
Hatramin'ny taonjato faha-XNUMX dia niorina ny teôria Basque-Iberian, ka i Basque no hany fiteny tany am-boalohany tao amin'ny saikinosy ary Iberiania no nandimby azy, na i Wihelm von Humboldt, rahalahin'ny Alexander von Humboldt tiako dia nanohana an'io teôria io. Saingy androany dia tsy misy resaka intsony.
Fomba fanaovana taratasy asa-tanana
1 Zohy any San José
2 Vohitra Iberiana
2.1 Galerie vohitra
2.2 Ny fitenin'ny Iberianina